अनुमति बिना नेपाली भूमिमा भारतले बनायो पुल र बाटो !
अनुमति बिना नेपाली भूमिमा भारतले बनायो पुल र बाटो !
साझा अनलाईन सम्पादक २०७४ फाल्गुण १५ गते मा प्रकाशित 172 पटक पढिएको
दार्चुलाको उत्तरी क्षेत्रमा भारतले नेपालसँग अनुमति नै नलिई बाटो र महाकाली नदीमा पुल बनाएको छ । व्यास गाउँपालिका–२ ताम्बाकु घाटबगर र दोपखे क्षेत्रमा तीनवटा काठेपुल र बाटो बनाएको स्थानीय बासिन्दाले बताए ।
यो क्षेत्रमा बस्ती छैन भने यहाँबाट चार घन्टाको दूरी दक्षिणमा रहेको दुम्लिङमा नेपाल प्रहरीको पोस्ट छ । यो क्षेत्रको महाकाली नदीमा पानीको बहाव न्यून रहेकाले काठेपुलको नै प्रयोग हुँदै आएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दार्चुलाका प्रहरी नायब उपरीक्षक जनकबहादुर शाहीले भारतले काठेपुल र बाटो बनाएको खबर आएको बताए । डिएसपी शाहीले भने, ‘बिहीबार दुम्लिङ प्रहरी चौकीबाट पुल र बाटो बनाएको क्षेत्रमा प्रहरी टोली खटाएका छौँ ।
किन बनायो काठेपुल र बाटो ?
भारतले धार्चुलाबाट महाकालीको पश्चिम किनारैकिनार लिपुलेक पुग्ने सडक निर्माण गरिरहेको छ । सडक निर्माणका कारण भारतको लखनपुरदेखि बुँदीसम्मको २५ किलोमिटर क्षेत्रमा बाटो अवरुद्ध छ । त्यसभन्दा उत्तरतिरको क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि आवश्यक उपकरण लग्न भारततर्फको बाटो बन्द भएपछि नेपालको बाटो प्रयोग गरेको स्थानीय बासिन्दाले बताए ।
लखनपुरबाट नेपाली भूमि प्रयोग गर्न महाकाली नदीमा काठेपुल बनाएको हो । त्यससँगै नेपालतर्फ दुई किलोमिटर बाटोसमेत खनेको व्यास गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष धीरनसिंह बुढाथोकीले बताए । वडाध्यक्ष बुढाथोकीले भने, ‘महाकाली नदी पार गराएर तीनवटा डोजर माथिल्लो क्षेत्रमा लगिएको छ । डोजर लग्न बाटो पनि खनिएको हो ।’
त्यस्तै दार्चुलाको तम्बाकु खोलादेखि थिइको भिरको फेदसम्म दुई किलोमिटर बाटो बनाइएको उनले बताए । भारतले महाकाली नदीमा अन्य चार ठाउँमा पुल निर्माण गर्ने र १२ किलोमिटर बाटो बनाउने तयारीसमेत गरिरहेको स्थानीय बासिन्दाले बताए ।
- नयां पत्रिकाबाट
२०७४ फाल्गुण १५ गते मा प्रकाशित